Afhayeenka Barlamaanka oo la kulmey Ergigii hore ee Qaramada Midoobey ee Somalia, Mahiga – idalenews.com
Afhayeenka Barlamaanka oo la kulmey Ergigii hore ee Qaramada Midoobey ee Somalia, Mahiga
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday Qaramada Midoobey oo uu hogaaminayay Ergeyga QM u qaabilsan Somaliya Amb. Augustine Mahiga oo bisha June ee soo socoda shaqada ka tagaya.
Kulankan ayaa waxa ay ka wada hadleen Gudoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Danjire Augustine Mahiga ayaa waxaa ka mid ah isbedellada hormarineed ee ka jira gudaha dalka iyo guullaha isdaba jooga ah ee ay gaartay Dowladda Federaalka Soomaaliya oo isugu jira hormarinta xiriirka caalamka iyo arimmo kale sida isbedellada amni ee iyagu horseeday in magaalada Muqdisho laga furo xafiisyada hay’adaha Caalamka iyo Safaarradaha.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulankaasi markii uu soo gebageboobay la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in Mahiga uu wax badan soo qabtay waqtigii laga soo baxayay KMG.isagoo sheegay inay ka wada hadleen iskaashiga Q.M iyo soomaaliya,waxyaabihii u qabsoomay soomaaliya iyo casharada laga soo bartay.
Danjire Augustine Mahiga oo isna dhankiisa saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Jawaari ay isla soo shaqeeyeen marxaladihii adkaa ee Soomaaliya looga saarayey KMG-kii waxaana uu ku ammaanay sidii hufnaanta laheyd ee uu ulasoo shaqeeyey mudadaasi adkeyd ee looga soo gudbayey KMG-ka.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa dhowana u magacaabay Ergeygiisa gaarka ah ee u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Kay oo ah siyaasi u dhashay dalka Britain, isagoo bisha June ee soo socda xilka kala wareegaya Augustine Mahiga oo afartii sano ee u dambeysay hayay xilkaas.